PRADEEP BASHYAL: एउटा अग्लो नेपाली
एउटा अग्लो नेपाली
दीपक अधिकारी र प्रदीप बस्याल
सन् '८० को दशकतिरको प्रसंग हो। काठमाडौँको नामी सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा केटीहरू पढ्न पाउँदैनथे। त्यसैले स्कुलमा हुने नाटकमा केटाले नै केटीको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो। त्यसका लागि शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको छनोट हुने गर्थे, हाल अमेरकिा बसेर फेसनको दुनियाँमा धुम मच्चाइरहेका प्रबल गुरुङ। उनका त्यतिबेलाका शिक्षक देवेन्द्र खनाल सम्झन्छन्, "प्रबलले केटीको चरत्रि बुझेर त्यसलाई अभिनयमा उतार्थे।"
सेन्ट जेभियर्सको भित्तामा सबै पूर्वविद्यार्थीको जस्तै प्रबलको तस्बिर पनि सजिएको छ। अझ त्यसभन्दा बढी, त्यसबेला अन्तरमुखी र अधिकांश समय लाइब्रेरीमा बिताउने प्रबलले फेसनको राजधानी न्युयोर्कमा पाएको सफलताबाट उनका शिक्षक र सहपाठी आश्चर्यचकित छन्। नहोऊन् पनि किन, जेभियर्सबाट एलएलसी सिध्याएर फेसनमा करिअर बनाउन निस्किएका प्रबल त्यसको दुई दशकपछि अहिले न्युयोर्क फेसन नगरीमा राज गररिहेका छन्। र, त्यसो गररिहँदा उनमा स्कुलदेखिकै नारी भावना बुझ्ने गुण सहयोगी भएको देखिन्छ।
यतिखेर हलिउड सेलिबि्रटीदेखि विश्वका चर्चित र शक्तिशाली महिलाबीच उनका पहिरनमा सजिने एकखाले होड छ। अमेरिकी प्रथम महिला मिचेल ओबामाले झन्डै दुई वर्षअघि प्रबलले तयार पारेको डे्रस ह्वाइट हाउसको गभर्नर्स डिनरमा लगाएपछि उनको प्रसिद्धिले फड्को मारेको हो । त्यसमाथि केही साताअघि बेलायती राजकुमारी केट मिडलटनले प्रबलकै डिजाइनको फूलदार बुट्टा भएको ड्रेस लगाएपछि उनको चर्चा झनै चुलियो। त्यसो त पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसकी छोरी बारबराले समेत ह्वाइट हाउसका पछिल्ला शोमा प्रबलकै लुगा लगाएकी थिइन्। विश्वप्रसिद्ध फेसन म्यागेजिन भोगमा लामो अन्तर्वार्ता र फोटो सुट गरसिकेकी बारबरा 'फेसन कन्सस' युवती मानिन्छिन्। उनले समेत प्रबलको डिजाइन लगाउनुलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले प्रबलको सफलताको अर्को कडीका रूपमा लिएका छन्।
सोसल मिडिया टि्वटर र फेसबुकमा नेपालको जनसंख्याभन्दा ज्यादा फलोअर र साथी भएकी अमेरिकी गायिका लेडी गागाले झन्डै एक महिनाअघि न्युयोर्कमा आफ्नो पर्फ्युम 'लेडी गागा फेम' सार्वजनिक गर्दा प्रबलले डिजाइन गरेको लुगा लगाएकी थिइन्। स्वाभाविक रूपमा मिडियाको आकर्षणको केन्द्र रहेको उक्त समारोहले प्रबलका डिजाइनलाई चर्चामा ल्यायो। उनले डिजाइन गरेका पहिरन लगाउनेमा चर्चित हलिउड अभिनेत्री तथा पूर्वफेसन मोडल रचेल विज, अमेरिकी टक शो होस्ट एवं व्यवसायी ओप|mा विन्प|mे, अमेरिकी अभिनेत्रीहरू जोयी साल्डना, सारा जेसिका पार्कर, डेमी मुर, एनी हाथवे, जेनिफर लरेन्स, जर्मन अभिनेत्री डेनी क्रुगरलगायत छन्।
दर्जनौँ फेसन पत्रिकाले आफ्नो आवरणमा प्रबलको डिजाइनका पहिरन प्रयोग गरेका छन्। त्यसले दिने एउटा राम्रो सन्देश के पनि हो भने उनी फेसन समीक्षक र सम्पादकबाट रुचाइने डिजाइनर हुन्। र, पश्चिमा फेसन जगत्मा ठूल्ठूला सेलिबि्रटी आफ्नो पहिरनका लागि तिनै सम्पादकले सुझाएका पहिरन लगाउँछन्। प्रबलको हकमा समेत त्यो धेरै हदसम्म लागू भएको हुन सक्छ।
ब्रान्ड 'प्रबल गुरुङ’
अमेरिकी फेसन दुनियाँ त्यहाँ आयोजना हुने फेसन सप्ताह, फेसन प्रदर्शनी र तिनका बारे त्यहाँका रंगीन, चिल्ला कागजमा छापिने म्यागेजिनको वरिपरि घुम्छ। त्यसमाथि प्रबलका ग्राहक पनि तिनै पत्रिका पढेर वा फेसन शो अनि रेड कार्पेट समारोहका तस्बिर हेरेर आफ्नो डे्रस छनोट गर्ने सम्पन्न अमेरिकी हुन्छन्। त्यसो त उनी आमयुवतीका फेसन डिजाइनर होइनन्। किनभने, उनका साधारण डिजाइनको मूल्य नै चार सयदेखि चार हजार डलर (३४ हजारदेखि ३ लाख ३५ हजार रुपियाँ)सम्म पर्छ। सन् २००९ मा उनले फेसन डिजाइनिङ्को काम सुरु गर्दा एक वर्षमा १ सय ५० वटा पहिरन बनाउँथे भने अहिले उनी बर्सेनि झन्डै दुई हजार पहिरन बनाउँछन्।
अमेरिकी फेसन म्यागेजिन इन्स्टाइलले लेखेको छ, 'नेपाली डिजाइनर प्रबलले कसरी युवतीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने जानेका छन्, जसले उनीहरूलाई ठूला समारोहमा निकै आकर्षक देखाउन सहयोग गरोस्।' त्यसैले अहिले 'प्रबल गुरुङ' न्युयोर्क फेसन जगत्मा एउटा सफल ब्रान्ड बनेको छ। हलिउड अभिनेत्री क्याथरनि अनले प्रबललाई आफ्नो काममा निकै दिमाग लगाउने डिजाइनर भनेकी छन्। सायद त्यसैले विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा पर्दासमेत उनको ब्रान्ड संकटमा परेन। प्रबललाई न्युयोर्कमा नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली पत्रकार कसिसदास श्रेष्ठ भन्छन्, "एक डिजाइनरका रूपमा उनले सुरुमै के कुरा बुझे भने कोठामा बसेर सुन्दर डिजाइन गरेर मात्र हुँदैन। त्यसका हरेक पक्षसँग साक्षात्कार हुनु आवश्यक छ।"
अहिलेको प्रसिद्धिसँग तुलना गर्दा २००९ अघिसम्म प्रबल बेरोजगारजस्तै थिए। त्यसमाथि विश्व आर्थिक मन्दी उत्कर्षमा थियो। यद्यपि, प्रबलले आफ्नो दशक लामो इच्छाशक्ति, मिहिनेत र सिर्जनशीलतालाई बाहिर ल्याउन ढिलो गर्न नहुने ठाने। मन्दी नै सही, उनले आफ्नो ब्रान्ड 'प्रबल गुरुङ' त्यस वर्षको फेब्रुअरीमा सुरु गरे, न्युयोर्क फेसन सप्ताहमार्फत। फेसन दुनियाँमा विश्वभर हुने चार प्रमुख सप्ताहमध्ये (अन्य तीन पेरसि, लन्डन र मिलानमा हुन्छन्) न्युयोर्क फेसन विक प्रबलका लागि महत्त्वपूर्ण प्लेटर्फम साबित भयो, जसले उनलाई अलग दुनियाँसामु ल्याइदियो।
उनले 'डेब्यु' गरेको न्युयोर्कको फ्ल्यागआर्ट फाउन्डेसनमा भएका दुई फेसन शो सफल पार्न नायिका डेमी मुर र उनका पति आस्टन कुचरले नै टि्वट गरेका थिए। हजारौँ फ्यान भएका ती हलिउड जोडी (जो हाल छुट्टसिकेका छन्)ले साथ दिएपछि प्रबलको नाम त्यस फिल्म उद्योगमा सजिलै फैलियो। चर्चाको पछिल्लो कडी भने बेलायती राजकुमारीले केही साताअघि सिंगापुरमा लगाएको पहिरनले दिलायो, जसलाई प्रबल आफ्नो करिअरकै ठूलो सफलता ठान्छन्। रानी एलिजाबेथ द्वितीयाको हीरक जयन्तीको अवसरमा एसिया तथा दक्षिण प्रशान्तको भ्रमणमा रहेको बेलायती राजपरविारका सदस्य राजकुमार विलियमकी पत्नी राजकुमारी मिडलटनले उक्त पहिरन लगाएकी थिइन्। त्यसै पनि बेलायती राजपरिवार पहिरनको मामिलामा निकै संवेदनशील हुन्छ। उनीहरूले कसैको डिजाइन लगाउनु भनेकै सबभन्दा ठूलो विज्ञापन हो। स्टेट डिनरभन्दा अघि हुने स्वागत समारोहमा केटले प्रबलले डिजाइन गरेको लुगा लगाएकी थिइन्, जसलाई प्रबलले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा 'स्मार्ट च्वाइस फर द भेन्यु' भनेका थिए।
एकपछि अर्को यस्ता सफलताका किस्सा आइरहँदा धेरैलाई प्रबलले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय सफलता पाए भन्ने लाग्न सक्छ। वास्तविकता अलि भिन्न छ। "उनले अहिलेको उचाइ हासिल गर्न दस वर्ष कडा मिहिनेत गरेका छन्," वेभ म्यागेजिनका पूर्वसम्पादक कसिसदास भन्छन्, "उनको यो सफलता एक व्यक्तिको सपना र त्यसका लागि उसले गरेको मिहिनेत नै हो।" आफ्नो लेबलको सुरुवात गर्ने बेलासम्म न्युयोर्क फेसन जगत्मा उनका थुप्रै साथी बनिसकेका थिए, जसले उनलाई र्‍याम्पदेखि अन्य थुप्रै सामग्रीको व्यवस्था गरिदिए। दुई वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा प्रबलले भनेका थिए, "मेरो लुगा नै नहेरी साथीहरूले विश्वास गर्थे।"
"उनी एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि एकदमै शालीन, सहृदयी र हँसीमजाक गर्न रुचाउने व्यक्ति हुन्," कसिसदास भन्छन्, "आमा र दिदीले उनलाई आफ्नो धरातल नबिर्सन सधैँ जोड दिइराखे।" प्रबलकी साथीसमेत रहेकी लेखक सुषमा जोशीले आफ्नो एउटा लेखमा प्रबल मनोरञ्जन र काम दुवै मन लगाएर गर्न सिपालु भएको बताएकी थिइन्। कान्तिपुर अनलाइनमा प्रकाशित त्यस लेखमा प्रबलले बताएको आफ्नो सफलताको रहस्य जोशीले खोलेकी छन्, "कसैले वास्ता नगररिहेका बेला सक्दो मिहिनेत गरेर आफूलाई अब्बल साबित गर्नु नै उनको सफलताको राज हो।"
प्रबलका बाबु बाबाकृष्ण गुरुङ सिंगापुर पुलिसमा काम गर्थे भने आमा दुर्गा राणा कला र फेसन डिजाइनिङ्जस्तो सिर्जनात्मक काममा रुचि राख्ने महिला थिइन्। यस्तो घरेलु पृष्ठभूमिमा हुर्केका प्रबलको लालनपालन नेपाल र सिंगापुरमा भयो। सिंगापुरमा जन्मेर उतै बाल्यकाल बिताएका उनले विद्यालय शिक्षा भने काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाट सके। "उनमा विचित्रको आत्मविश्वास थियो, आफू अब्बल भए पनि, नभए पनि हरेक अतिरत्तिm क्रियाकलापमा सहभागी हुन्थे," स्कुलमा नेपाली पढाएका शिक्षक देवेन्द्र खनाल सम्झन्छन्, "पढाइमा भने मध्यम खालका थिए।" सेन्ट जेभियर्समा कि त निकै अब्बल या त निकै मूर्ख विद्यार्थीलाई बढी सम्भिmन्छन् शिक्षकहरू। प्रबल दुवैमा पर्दैनथे। त्यसबेला स्कुलको पाइन्ट सेतो रंगको थियो, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पोसाक मैलिने समस्या बढी हुन्थ्यो। अर्का शिक्षक राजु अर्याल सम्झन्छन्, "त्यो समस्या उनमा देखिँदैनथ्यो। सानै उमेरमा पनि उनी लुगामा नियमित आइरन लगाउँथे। उनका जुत्ता सधैँ पालिस गरएिका हुन्थे। कपालसमेत चिटिक्क परेको हुन्थ्यो।"
प्रबल आफैँचाहिँ आफ्नो बाल्यकाल कसरी सम्भिmन्छन् त ? नेपालसँगको इमेल कुराकानीमा उनले भने, "म सानो छँदै डिजाइनसम्बन्धी मेरा भावना पोख्ने गर्थें। आफ्ना टिसर्ट वा जुत्तामा कुनै चिन्ह लगाएर हेर्थें।" बाल्यकाल बिताउन र सपना देख्नका लागि नेपाल स्वणिर्म देश भएको बताउँदै उनी भन्छन्, "त्यहाँका रंगहरू, लुगाको बनावट र सडकमा देखिने फेसन म कहिल्यै भुल्दिनँ।"
साथीभाइसँग बढी घुलमिल नहुने उनको रुचि उतिखेरैदेखि पूर्वव्यावसायिक शिक्षाको कक्षामा बढ्ता हुन्थ्यो। त्यसबेलाका सहपाठी श्याम महर्जन उनको अनुसन्धानमूलक बानी अझै राम्ररी सम्झन्छन्। भन्छन्, "प्रोजेक्ट वर्कहरूमा उनले शिक्षकलाई पनि थाहा नहुने कुरा खोजेर ल्याउँथे। इन्टरनेट नभएको उतिबेला त्यसका लागि प्रबल घन्टौँ लाइब्रेरीमा बिताउँथे।"
एसएलसीपछि प्रबल भारतको नयाँ दिल्ली हान्निए, जहाँ केही समय उनले होटल म्यानेजमेन्टको तालिम लिए। त्यतिबेलासम्म उनले फेसन डिजाइनलाई नै करअिर बनाउने निधो गरसिकेका थिए। तर, त्यस्ता स्कुल नेपालमा थिएनन्, न त आधुनिक फेसनसम्बन्धी गतिविधि नै हुन्थे। त्यसैले उनी नयाँ दिल्लीस्थित इन्डियन इन्स्िटच्युट अफ फेसन टेक्नोलोजीमा भर्ना भए।
स्नातक सक्दानसक्दै सोही कलेजबाट 'बेस्ट स्टुडेन्ट अवार्ड'सहित ग्रेजुएट भएका चर्चित फेसन डिजाइनर मनीष अरोरासँग काम गर्न पाउनु उनका लागि ठूलो अवसर भइदियो। मनीषले सन् १९९७ मै आफ्नो लेबल 'मनीष अरोरा' सार्वजनिक गरेका थिए। प्रबलका लागि भने त्यस्तो गर्नु निकै परको कुरा थियो। मनीषले भारतका परम्परागत पहिरन र शैलीलाई केही आधुनिक स्वरूप दिएर नयाँ कामको थालनी गरेका थिए। प्रबलका काममा समेत अहिले धेरैतिर नेपालीपन जोडिएको पाइन्छ। भन्छन्, "दिल्लीमा पढ्दा नै मैले डिजाइन र फेसनका आधारभूत कुरा ज्ाान्ने मौका पाएँ। मनीषसँग काम गर्दा नै मेरो सिर्जनशीलताले आकार लिन थालेको हो। त्यहाँको शिक्षा र मनीषसँग काम गर्दा पाएको अनुभव नै मेरा लागि कोसेढुंगा थियो।"
प्रबल मनीषसँग मात्र खुम्चिएर बस्न चाहँदैनथे। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेसन दुनियाँमा जम्नु थियो। लन्डन र सिड्नी त्यही अवसर र अवस्था बुझ्ने कामकै लागि गए उनी। उनका लागि न्युयोर्कको ढोका भने आर्ट्स र डिजाइनका लागि विश्वकै प्रतिष्ठित पार्सन्स स्कुल अफ डिजाइनमा छात्रवृत्ति पाएसँगै खुल्यो। त्यहाँ पढ्न पाउनु नै चानचुने कुरा थिएन। "जब मैले आफू त्यहाँ भर्ना पाएको थाहा पाएँ, एकदमै उत्साहित भएँ। मैले साथीहरूलाई एउटा पार्टीसमेत दिएको थिएँ," उनले नेपालसँग भने।
नेपालजस्तो मुलुकका विद्यार्थीलाई न्युयोर्क सहर सुरुतिर बिरानो लाग्नुपर्ने हो तर नयाँ दिल्लीमा झन्डै एक दशक बिताएका प्रबल त्यस अमेरिकी महानगरीमा पाइला टेक्नेबित्तिकै मोहित भए। "न्युयोर्क सहर मलाई यति आनन्ददायी लाग्यो कि म तत्कालै पढाइमा दत्तचित्त भएँ।" न्युयोर्कबारेको उनको एउटा 'इम्प्रेसन' गज्जबको छ। उनले एउटा रेस्टुराँमा प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार डेभिड बोई बसेको टेबलनजिकै बसेर आफूलाई मनपर्ने खाना खाए। त्यसबेला उनलाई सम्भावना र उत्साह भएको सहरमा घुलमिल हुन त्यति गाह्रो हुँदैन भन्ने लाग्यो।
आफ्नो पहिलो 'ब्रेक'बारे कुरा गर्दै प्रबल भन्छन्, "मेरो प्रस्तुतिको भोलिपल्ट एक जना साथीले फोन गरेर विमेन्स वेयर डेली (डब्लूडब्लूडी) पत्रिका (जसलाई बाइबल अफ फेसन भनिन्छ)को आवरणमा मेरो डिजाइन परेको भन्दै बधाई दिए। मैले दगुर्दै गएर त्यो पत्रिका किनेँ। त्यो क्षण म शब्दमा व्याख्या गर्न सक्दिनँ।" न्युयोर्क फेसन विक भइरहेका बेला फेसनको नामी पत्रिकामा छाउनु निकै ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो। यद्यपि, २००७ को जनवरीमै भोगमा विख्यात हलिउड स्टार एन्जेलिना जोलीले आवरण फोटो सुट दिँदा प्रबलले तयार पारेको लुगा लगाएकी थिइन्, जुन उनले त्यतिबेला काम गरेको न्युयोर्ककै प्रतिष्ठित बिल ब्लासबाट मगाइएको थियो।
न्युयोर्कमा उनले आफ्नो सुरुआती वर्षमै एक प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट डिजाइनरको अवार्ड पाए। भारतमा पढ्दा मनीष अरोरा भेटिएझैँ न्युयोर्कमा फेसन डिजाइनर तथा मोडल डोना करन, ६४, भेटिइन्, जो आफ्नो बुढ्यौलीमा समेत पार्सन्समै पढिरहेकी थिइन्। पार्सन्स छाडेपछि उनले न्युयोर्ककै वेस्ट भिलेजमा काम गररिहेकी चर्चित अमेरिकी डिजाइनर सिन्थिया रलीको टिमसँग दुई वर्ष काम गरे। लगत्तै उनका लागि डिजाइन डाइरेक्टरका रूपमा बिल ब्लाससँग काम गर्ने अवसर जुर्‍यो। अमेरकिन फेसन क्रिटिक्स अवार्ड विजेता बिल ब्लास र उनको लेबलमा काम गर्न पाउनु नै एउटा नेपालीका लागि ठूलो सफलता हो। तर, प्रबल सफलताका अरू उचाइ चुम्दै गए। उनी रोकिएनन्।
२००९ यता उनी आफ्नै लेबल 'प्रबल गुरुङ' विश्वको फेसन राजधानी भनिने न्युयोर्क सहरमा चल्तीको ब्रान्ड भएको छ। अहिले उनी आईसीबी नामक फेसन कम्पनीका मुख्य डिजाइनर पनि हुन्, जसका पहिरनको मूल्य भने उनको आफ्नैभन्दा केही कम छ। उनले आईसीबीका लागि तयार गरेका डिजाइन दुई महिनाअघि सार्वजनिक हुँदा तत्कालै बिक्री भएका थिए।
उनको एउटा डिजाइनको मूल्य अर्थात् झन्डै चार हजार अमेरिकी डलरले काठमाडौँको एउटा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई वर्ष दिन खान पुग्छ। एकातर्फ उनी 'इभिनिङ् वेयर' भनिने साँझपख वा पार्टीमा जाँदा लगाउने पहिरन डिजाइन गर्छन् भने पश्चिमा मुलुकमा नेपालजस्तो गरबि देशको प्रतिनिधित्वसमेत गर्छन्। यी दुईलाई उनी कसरी तालमेल मिलाउँदा हुन् ? भन्छन्, "नेपाल केही मानेमा गरबि भए पनि धेरै कुरामा धनी छ। त्यहाँका गतिशील दृश्य र कपडाका ढाँचाबाट म प्रभावित छु। मेरा कतिपय कच्चापदार्थ भारतबाट समेत आउँछन्।" उनी चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील माइती नेपालका सद्भावना दूत पनि हुन्। त्यो अभियानसँग आफू जोडिएर केही योगदान पुर्‍याउन पाएकामा गर्व गर्छन् उनी।
न्युयोर्कको फेसन जगत्मा छाएपछि पनि प्रबलले आफ्नो थातथलो भुलेका छैनन्। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई दिने अन्तर्वार्तामा उनले आफू नेपाली रहेको बताउन छुटाउँदैनन्। बरू उक्त सफलताका पछाडि काठमाडौँको संस्कृति जोडिएको बताउँछन्। टाइम म्यागेजिनसँगको हालैको भिडियो अन्तर्वार्तामा उनले अधिकांश अमेरिकीले आफ्नो नाम उच्चारण गर्नसमेत नजानेको बताएका छन्। तर, त्यसबाट उनी कत्ति पनि विचलित छैनन्। आफ्नो सफलताको श्रेय उनी आफ्नो दृढता र विश्वासलाई दिन्छन्। टाइमको 'टेन क्वेस्चन्स' नामक अन्तर्वार्ता स्तम्भमा उनले आफ्नो सफलता व्यक्तिगत मात्र नभएर समग्र नेपालकै सफलता भएको बताएका छन्। आफ्ना खरदिकर्ता, फेसन समालोचक, फेसन पत्रिकाका सम्पादकहरू र वितरकलाई पनि उनी सफलताको केही अंश मान्छन्। उनले आफू भाग्यमानी भएको कुरा पनि बिर्सेका छैनन्।
२०१० मा प्रबल फेसन दुनियाँको ओस्कार मानिने सीएफडीए -काउन्सिल अफ फेसन डिजाइनर्स) अवार्डका कारण पनि चर्चामा रहे। जहाँ उनी 'सवारोभ्स्की वुमन्स वेयर'का लागि मनोनयनमा परेका थिए। यद्यपि, अवार्ड भने २०११ मा गएर वुमन्स वेयरतर्फको इमर्जिङ् ट्यालेन्ट अवार्ड पाए। २०१० मा उनको पोल्टामा 'भोग फेसन फन्ड' विधामा रनरअपको अवार्ड मात्रै थियो। सोही साल उनले इको डोमानी फेसन फन्ड अवार्ड पनि पाएका थिए।
प्रबलजस्तो अति व्यस्त डिजाइनरको दैनिकी कसरी बित्छ ? भन्छन्, "प्रायःजसो दिनदिनै फरक-फरक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइनका बेला म त्यससँगै बगिरहेको हुन्छु। त्यतिबेला मलाई आनन्द लाग्छ। म कपडा, रंग, कला र विम्बहरूसँग खेल्छु र तिनले नै मलाई प्रेरति गर्छन्।" के अब प्रबल ढुक्क भएर बस्छन् त ? होइन, उनी त अझै आफ्नो ब्रान्डलाई फैलाउन चाहँदा रहेछन्। भन्छन्, "हामीसँग एकसे एक नयाँ पहिरन छन्। जस्तो कि, प्रबल गुरुङ फुटवेयर, प्रबल गुरुङ सनग्लासेस, प्रबल गुरुङ हेडवेयर आदि।"
उमेरले ४० वर्ष नकाटेका प्रबल गुरुङ त पश्चिमा फेसन जगत्मा स्थापित भइसके तर उनीजस्तै हुने सपना देख्ने नेपाली किशोरलाई के भन्न चाहन्छन् त ? "त्यस्ता युवालाई म सधैँ आफ्नो मनको कुरा सुन्न र त्यसलाई पछ्याउन, अरूलाई प्रेरति गर्न र प्रेरति हुन सल्लाह दिन्छु," प्रबल भन्छन्, "अर्को कुरा के पनि भने कहिल्यै पनि आफू को हुँ र कहाँबाट आएको हुँ भन्ने बिर्सनुहुँदैन।" के प्रबलले सफलताको शिखर चुमिसके ? भनिन्छ, सफलताको शिखरमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिरहन झन् गाह्रो छ। प्रबल पनि ठान्छन्, "थुप्रै गर्न बाँकी छ। र, सम्भावना पनि उत्तिकै छन्।"
एक लाखभन्दा बढी प्रशंसक
इन्टरनेटको सर्च इन्जिन गुगलमा 'प्रबल गुरुङ’ टाइप गर्नेबित्तिकै झन्डै ६२ लाख नतिजा देखा पर्छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै सक्रिय छन्। उनी एक मात्र त्यस्ता नेपाली हुन्, जसको टि्वटर एकाउन्ट टि्वटरबाटै भेरिफाइड गरिएको छ। टि्वटरमा उनलाई ६७ हजारजति प्रशंसकले पछ्याइरहेका छन् भने फेसबुकमा ४७ हजारजतिले। त्यहाँ आएका कुराहरूमा उनी छलफल र बहससमेत गर्न रुचाउँछन्। पछिल्लोपटक फेसन डिजाइनर बन्न खोज्ने एक १३ वर्षे ठिटोले पठाएको चिट्ठी उनले वेबसाइट इन्स्टाग्राम पेजमार्फत सेयर गरेका थिए, त्यही पत्र र प्रबलको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै ः
प्रिय प्रबल गुरुङ !
यहाँले सेप्टेम्बर २२ मा इन्स्टाग्राममा दिएको मन छुने प्रतिक्रिया पढेपछि म तपाईंलाई प्रश्न सोध्न प्रेरित भएको हुँ। यहाँलाई थाहा छ/छैन, म सिकागोको एक १३ वषर्ीय युवक हुँ, जसलाई आफू फेसन डिजाइनर बन्नु छ भन्ने थाहा छ। तपाईं न्युयोर्क सहरको उत्कृष्ट डिजाइनर र मैले माया गर्नेमध्येको हुनुहुन्छ। मलाई लाग्यो, मैले तपाईंलाई आफ्ना केही ताजा डिजाइन पठाउ“m र त्यसबाट आलोचनात्मक टिप्पणी र सुझाव मागूँ। म तिनलाई निकै सम्मानसाथ ग्रहण गर्नेछु। तपाईं मेरो उत्कृष्ट डिजाइनरमध्येको भएकै कारण पनि म त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछु। तपाईंले मेरो पत्रको जवाफ दिएमा म धन्य हुने थिएँ।
(यसले मेरो मन पगालेको छ। मैले प्राप्त गरेेकामध्ये एउटा सुन्दर चिट्ठी। कसलाई के थाहा आफूले गरेको कामको पुष्टि एउटा १३ वर्षको बालकबाट आउँछ भन्ने।)
- दिक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा गरिएको हीरक जयन्ती भ्रमणको त्यो मात्रै त्यस्तो एक दिन हो, डचेट अफ क्याम्बि्रजको फेसनले अधिकतम तहल्का मच्चाएको।
- प्रबलको डिजाइनमा सधैँ नारीत्वको भाव झल्किन्छ। (राजकुमारी केट मिडलटनले सिंगापुरमा प्रबल गुरुङको पोसाक लगाउँदा टेलिग्राफ यूके)
- फेसन उद्योगकी प्रिय, अमेरिकी प्रथम महिला (मिचेल ओबामा) प्रबल गुरुङ, ज्यासन हुजस्ता युवा डिजाइनरलाई अवसर दिएकाले चर्चित छिन्। (मिचेल ओबामाले प्रबलको पहिरन लगाएपछि, टाइम म्यागेजिन)
- प्रबल गुरुङले आफ्नो बेग्लै र प्रतिस्पर्धी पहिरनले न्युयोर्क फेसन विकमा तरंग सिर्जना गरििदएका छन्। (वाल स्टि्रट जर्नल)
- प्रबलले फरक-फरक धारका हाइ प्रोफाइल महिलालाई आफ्ना नियमित ग्राहक बनाएका छन्। (न्युयोर्क टाइम्स)
टाइमको 'टेन क्वेस्चन्स'
पश्चिमा छापामा त्यसै त नेपाल छायाँमा पर्छ। ठूलै राजनीतिक उथलपुथल हुँदाबाहेक नेपाल र नेपाली त्यस्ता 'कभरेज'का हकदार बन्दैनन्। त्यस्तो परिवेशका बीच पनि साधारण नेपाली परिवार तन्नेरी प्रबल गुरुङ टाइम म्यागेजिनको १९ सेप्टेम्बर २०१२ को अंकको अन्तिम पृष्ठको नियमित अन्तर्वार्ता स्तम्भ 'टेन क्वेस्चन्स'मा थिए। त्यहाँ उनले गर्वसाथ आफ्नो सफलता नेपाल र नेपालीको पनि हो भनेका थिए।
टाइमले उक्त स्तम्भका लागि व्यक्तिको पद र हैसियतभन्दा पनि उसको व्यक्तित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छ। न्युजविक पत्रिकामा भने कुनै बेला त्यस्तै अन्तिम पेजको अन्तर्वार्तामा मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्र र मनमोहन अधिकारी थिए। टाइमले भने यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अन्तर्वार्ता छापेको थियो। तर, टाइमले कुनै गैरराजनीतिक नेपालीको अन्तर्वार्ता छापेको चाहिँ यो नै पहिलो अवसर हो।
"तिम्रो अभूतपूर्व सिर्जना मिसिएको पहिरन लगाउन पाउँदा म धन्य छु। धन्यवाद प्रबल गुरुङ।"
- हलिउड अभिनेत्री डेमी मुर प्रबलको डिजाइन लगाएपछि
"लेडी गागाले तिम्रो पहिरन लगाउने थाहा पाउँदा निकै खुसी लाग्यो। तिमीलाई अझै शक्ति मिलोस्।"
- बलिउड निर्देशक करण जोहर हलिउड अभिनेत्री लेडी गागाले प्रबलको पहिरन लगाउने थाहा पाएपछि
"प्रबल गुरुङको शो अब केही क्षणमा सुरु हुँदै छ। प्रबलले एउटा सिजनभरि के पकाइरहेको थियो, त्यो जान्न मेरो धैर्यको सीमा नाघिसकेको छ।"
- हलिउड अभिनेत्री जोय साल्डना प्रबलको फेसन शो हुनुअगाडि ।
Originally appeared at Nepal Magazine's cover.
written by Admin at 1:45 AM
Labels: Fashion, Features, Person